ओम हस्पिटलको सेवा अब मोवाइल एप्सबाटै थाह हुने | Nepali Health
२०७३ वैशाख २३ गते १९:०९ मा प्रकाशित
काठमाण्डौं – आफ्ना सेवाबारे आम सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा जानकारी दिन चावहिलस्थित ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले मोवाइल एप्स सुरु गरेको छ ।
हाम्रो हस्पिटल नामक उक्त एप्समा अस्पतालसंग सम्बन्धित र स्वास्थ्य सेवाबारे सबै जानकारी पाइने बताइएको छ ।
नेपालमा बिभिन्न सस्थाहरु संग सम्बन्धित मोबाइल एप तयार भैसके पनि हस्पिटल र उसले दिने सेवा सुबिधाका बारेमा आधिकारीक जानकारी दिने गरी बनेको यो पहिलो मोबाइल एप भएको हस्पिटलको दाबी छ ।
के–के छ मोबाइल एप्समा ?
हस्पिटलले तयार पारेको मोबाइल एप्समा ओम हस्पिटलले दिने सेवा सुबिधा थाहा पाउन सकिने छ । बिरामीहरुले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सम्बन्धित चिकित्सकहरुको सल्लाह सहित स्वास्थ्य जाँच गराउने समय एप्सबाटै लिन सक्नेछन् ।
एप्समा एम्बुलेन्स, रक्तसंचारकेन्द्र, अस्पताल इमर्जेन्सी नम्बरहरु राखिएका छन् । त्यस्तै अस्पतालमा भएका सबै सेवा सुबिधा र सबै प्रकारका चिकित्सकहरु एप्समा समाबेश भएकाले एपको माध्यमबाट सेवा लिन सक्नुहुने छ ।
त्यसैगरी आवश्यकता अनुसार अस्पतालको ९८६२७९००५० नम्बरमा एसएमएस गरी डाक्टरहरुका बारेमा समय बुझ्न र लिन सकिने छ । यसैगरी अस्पतालले www.omhospitalnepal.com का माध्यमबाट अनलाइन नाम दर्ता सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ ।
सर्वोच्चद्धारा साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल दोस्रो मात्रा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा तीन लाख बढीको पीसीआर परीक्षण
राष्ट्रपतिद्धारा कोभिड–१९ नियन्त्रणमा भइरहेका कामबारे जानकारी
काठमाडौं उपत्यकामा थप एक साता ‘लुज लकडाउन’ (अब के के खुल्ने ? के के बन्द हुने ?)
नेपाल मेडिकल कलेजको ४९ प्रतिशत सेयर नेशनल मेडिकल कलेजले किन्यो
काठमाडौँको निषेधाज्ञा अझै १० दिन थप्ने तयारी
नुन पानी पिउनुका फाइदा